ဆန္ဒပြအလုပ်​သမား​များ လုပ်​ငန်းခွင်​ပြန်ဝင်ပြီး တောင်းဆိုကြရန် ပရီမီယာစက်​ရုံတာဝန်ရှိ ​ပြော | DVB
ဆန္ဒပြအလုပ်​သမား​များ လုပ်​ငန်းခွင်​ပြန်ဝင်ပြီး တောင်းဆိုကြရန် ပရီမီယာစက်​ရုံတာဝန်ရှိ ​ပြော
လှိုင်​သာယာစက်​မှုဇုန်​ ၃ အတွင်းမှာရှိတဲ့ ပရီမီယာစက်​ရုံ​ရှေ့မှာ ဆန္ဒထုတ်​​ဖော်​​နေကြတဲ့ အလုပ်​သမား ၆၀၀ ​ကျော်​ လုပ်​ငန်းခွင်ထဲ ပြန်​လည်​​ဝင်​ရောက်​လုပ်​လုပ်​​ကိုင်​ပြီး တောင်းဆိုကြဖို့ စက်ရုံဘက်​က ဝန်​ထမ်း​ရေးရာတာဝန်​ရှိသူတ​ဦးက ​ပြောပါတယ်​။
ဆန္ဒပြတဲ့ ရက်​ ၁၅ ရက်​မှာ ညှိနိူင်းမှု ၆ ကြိမ်​လုပ်​ခဲ့​ပေမယ့် မ​ပြေလည်​​သေးတဲ့ ပရီမီယာ​ကော်​ဖီစက်​ရုံ အလုပ်​ရှင်၊ ​အလုပ်​သမား အငြင်းပွားမှုနဲ့ပတ်​သက်ပြီး ​ပြေလည်​မှု မရ​သေးတာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။
စက်ရုံဘက်​က ထုတ်​ပြန်​ချက်​ထဲမှာ လုပ်​သား​တွေအ​နေနဲ့. ​ဖေ​ဖော်​ဝါရီ ၆ ရက်​​နေ့က​နေစပြီး လုပ်​ခလစာတိုးမြှင့်ပေး​စေလို​ကြောင်း စတင်​​တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ညှိနိူင်းတာတွေ လုပ်​​နေတဲ့ ကာလမှာပဲ ကုမ္ပဏီနဲ့ အလုပ်​ရှင်​အလုပ်​သမား EC စာချုပ်​ပါ အချက်​တချို့ကို အလုပ်​သမား​တွေ ဘက်​က စတင်​​ဖောက်​ဖျက်​ခဲ့ပြီး အလုပ်​ရှင်​အ​ပေါ်ဖိအား​ပေးခဲ့တယ်​လို့ ပါရှိပါတယ်​။ ဒါ့ပြင်​ စက်​ရုံအ​နေနဲ့ အလုပ်​သမား​တွေကို အနည်းဆုံးလုပ်​လခစာ သတ်​မှတ်​ချက်​ထက်​ ပို​ပေးထား တယ်​လို့ ဆိုပါတယ်​။
“ကျမတို့ မတရား​တောင်းဆို​နေသလား၊ မ​တောင်းဆိုဘူးလားဆိုတာ စာဖတ်​တတ်​သူတိုင်း သိပါတယ်​။ ကျမတို့ကို အခုလာညှိနှိုင်းသူ​တွေထဲမှာ ဆုံးဖြတ်​နိုင်​စွမ်းရှိတဲ့ လူတ​ယောက်​မှမပါဘူး” လို့ ပရီမီယာစက်​ရုံအလုပ်​သမား​သမဂ္ဂက ဘဏ္ဍာ​ရေးမှူး မခိုင်​ခင်​မိုးက​ပြောပါတယ်။
အခုလို အလုပ်​ရှင်​အလုပ်​သမားညှိနှိုင်း​နေစဉ်​ကာလမှာ အလုပ်​သမားသမဂ္ဂ​အဖွဲ့ဝင်​​တွေ အ​နေနဲ့ စု​ပေါင်း​တောင်းဆိုမူ​တွေကို လုပ်​ငန်းခွင်​အတွင်း ပြန်​လည်​ဝင်​​ရောက်​ပြီး ဆက်​လက်​​ တောင်းဆိုဖို့ စက်​ရုံဘက်​က ​မေတ္တာရပ်​ခံထားပါတယ်​။
ပရီမီယာစက်​ရုံက အလုပ်​သမား​ရေးရာ တာဝန်​ရှိသူက “ကျမတို့ဘက်​က ဥပ​ဒေပါ အချက်​​တွေကို အကုန်​လိုက်​​လျောထားပါတယ်​။ အလုပ်​သမား​တွေ လုပ်​ငန်းခွင်​ပြန်​ဝင်​ဖို့လည်း ​မျှော်​လင့်နေပါတယ်​” လို့ ​ပြောပါတယ်​။
လက်​ရှိအ​ခြေ​နေမှာ စက်​ရုံလုပ်​သား ၆၀၀​ ကျော်​​လောက် အပြင်​ထွက်​ ဆန္ဒပြ​တောင်းဆို​ နေတဲ့အတွက်​ ပရီမီယာ​ကော်​ဖီစက်​ရုံထုတ် ​ကုန်​လုပ်​ငန်း​တွေ လည်​ပတ်​ဖို့ ထိခိုက်​​နေပြီး လက်​ကျန်​ဝန်​ထမ်း ၃၀၀​ ကျော်​နဲ့ လည်​ပတ်​​အောင် ​ကြိုးစား​နေတယ်​လို့ ဆိုပါတယ်​။
ဒီအလုပ်​ရှင်​ အလုပ်​သမားအ​ရေးနဲ့ပတ်​သက်​ပြီး လှိုင်​သာယာမြို့နယ်​ အမျိုးသား ဒီမိုက​ရေစီရုံးမှာ ​ဖေ​ဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်​​နေ့က လွှတ်​​တော်​ကိုယ်​စားလှယ်ေ​တွေ အလုပ်​သမားအ​ရေး ​ဆောင်​ရွက်​သူ​တွေက ကြားဝင်​ညှိနိူင်း​ဖြေရှင်း​ပေး​ပေး​နေပြီး ၂၇ ရက်​​နေ့မှာလည်း အလုပ်​သမား​ရေးရာ ညှိနှိုင်း​ဖြေရှင်း​ရေးရုံးမှာ ၇ ​ကြိမ်​​မြောက်​ ထပ်​ညှိနှိုင်းဖို့ရှိ​နေပါတယ်​။
အလုပ်​သမား​တွေက​တော့ သူတို့​တောင်းဆိုချက်​​တွေဟာ မများပဲ အလုပ်​သမား အခွင့်အ​ရေးအရ ​တောင်းဆိုတာ ဖြစ်​တယ်​လို့ ​ပြောပါတယ်​။
အလုပ်​ရှင်​​တွေဘက်​က အလုပ်​သမား​တွေအလုပ်​ခွင်​ပြန်​ဝင်​​ရေးနဲ့ ​တောင်းဆိုချက်​​တွေကို ဥပ​ဒေအတိုင်းပဲ ဆက်​လက်​​ဆောင်​ရွက်​သွားဖို့ ရှိ​နေတယ်​လို့ ​ပြောပါတယ်​။
စက်ရုံ​​ရှေ့မှာ​တော့ ​ဖေ​ဖော်​ဝါရီ ၁၉ ရက်​​နေ့ရက်​စွဲနဲ့. ၂၁ ရက်​​နေ့ မနက်​မှာ ဆန္ဒပြအလုပ်​သမား​တွေဟာ လုပ်​ငန်းခွင်​ထဲကို ပြန်​လည်​ဝင်​​ရောက်​ပြီး လုပ်​ငန်း​တွေကို လုပ်​​ဆောင်​ခြင်းမရှိပါက အလုပ်​က ထုတ်​ပယ်​မယ်​လို့ ​ကြေညာချက်​ကို ဗီနိုင်းချိတ်​ဆွဲပြီး ကပ်​ထား​ပေမယ့် လက်​​တွေ့မှာ​တော့ အလုပ်​ထုတ်​ပယ်​ခြင်းထက်​ စက်​ရုံတွင်း အလုပ်​ပြန်​လာဆင်း​ ပေး​ရေးကိုပဲ ​မျှော်​လင့်​ထားတယ်​လို့. ဝန်​ထမ်း​ရေးရာ တာဝန်​ရှိသူက ရှင်းပြပါတယ်​။
Tags: ပရီမီယာစက်​ရုံတာဝန်ရှိ ​ပြောလုပ်​ငန်းခွင်​ပြန်ဝင်ပြီး
Previous story လိင်ပိုင်းစိတ်ဝင်စားသည့် ခရီးသွားများ ထိုင်းနိုင်ငံသို့သွားဟု ဂမ်ဘီယာခရီးသွားဝန်ကြီး ပြော
Next story လာဇီယိုကွင်းလယ်လူ ဆာဗစ်ကို ခေါ်ယူရန် မန်ယူ ပစ်မှတ်ထား